Yohane 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
4 Afei bere a Awurade behui sɛ Farisifo no ate sɛ Yesu renya asuafo bebree na ɔrebɔ nnipa pii asu+ sen Yohane no​— 2 ɛwom sɛ Yesu ankasa ammɔ asu na n’asuafo no na wɔbɔe​— 3 ofii Yudea de n’ani kyerɛɛ Galilea bio. 4 Nanso na ɛsɛ sɛ ɔfa Samaria.+ 5 Enti okoduu Samaria kurow bi a wɔfrɛ no Sikar a ɛbɛn asase a Yakob de maa ne ba Yosef no so.+ 6 Ɛhɔ nso na na Yakob abura+ wɔ. Na Yesu a akwantu no ama wabrɛ no tenaa abura no so. Saa bere no na ɛbɛyɛ owigyinae. 7 Ɔbea bi a ofi Samaria baa hɔ sɛ ɔrebɛsaw nsu. Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ma me bi nnom.” 8 (Ná n’asuafo no kɔ kurom rekɔtɔ aduan.) 9 Ɛnna Samariani bea no see no sɛ: “Adɛn na wo a woyɛ Yudani bisa me a meyɛ Samariani bea hɔ nsu anom?” (Ná Yudafo ne Samariafo nni hwee yɛ.)+ 10 Yesu bua see no sɛ: “Sɛ wunim akyɛde+ a Onyankopɔn de ma kwa ne onii+ a ɔreka akyerɛ wo sɛ, ‘Ma me bi nnom’ no a, anka wubebisa no na wama wo nkwa nsu.”+ 11 Ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Owura, wunni ade a wɔde saw nsu mpo, na abura no mu dɔ. Ɛnde, ɛhe na wunya nkwa nsu yi fi? 12 Woyɛ kɛse+ sen yɛn agya Yakob a ɔde abura yi maa yɛn na ɔno ankasa ne ne mma ne ne mmoa nom bi no anaa?” 13 Yesu bua see no sɛ: “Obiara a ɔnom nsu yi bi no, osukɔm bɛde no bio. 14 Nanso obiara a ɔbɛnom nsu a mede bɛma no no, osukɔm renne no da,+ na mmom nsu a mede bɛma no no bɛyɛ asuti+ wɔ ne mu a epuw kɔ daa nkwa mu.”+ 15 Ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Owura, ma me nsu yi bi na osukɔm anne me, na mankɔ so amma ha ammɛsaw nsu.” 16 Ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Kɔ na kɔfrɛ wo kunu bra ha.” 17 Ɔbea no bua see no sɛ: “Minni kunu.” Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Woaka no yiye sɛ, ‘Minni kunu.’ 18 Efisɛ woaware kununom baanum, na ɔbarima a wo ne no wɔ hɔ seesei no nyɛ wo kunu. Enti woaka nokware.” 19 Ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Owura, mahu sɛ woyɛ odiyifo.+ 20 Yɛn agyanom som wɔ bepɔw yi so;+ nanso mo de, moka sɛ Yerusalem ne baabi a ɛsɛ sɛ nnipa som.”+ 21 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbea, gye me di, dɔn no reba a morensom+ Agya no wɔ bepɔw yi so anaa Yerusalem.+ 22 Mosom nea munnim;+ yɛn de, yɛsom nea yenim, efisɛ nkwagye fi Yudafo mu.+ 23 Nanso dɔn no reba, na adu, sɛ nokware asomfo bɛsom Agya no honhom+ ne nokware mu,+ na nnipa saa nso na Agya no hwehwɛ ma wɔasom no.+ 24 Onyankopɔn yɛ Honhom,+ na ɛsɛ sɛ wɔn a wɔsom no no som no honhom ne nokware mu.”+ 25 Ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Minim sɛ Mesia+ a wɔfrɛ no Kristo+ no reba. Na sɛ onya ba a, ɔbɛka nneɛma nyinaa akyerɛ yɛn pefee.” 26 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Me a me ne wo rekasa yi, mene no.”+ 27 Saa bere no na n’asuafo no bae, na ɛyɛɛ wɔn nwonwa sɛ ɔne ɔbea rekasa. Nanso obiara anka sɛ: “Ɛdɛn na wohwehwɛ?” anaa, “Adɛn na wo ne ɔbea no rekasa?” 28 Ɛnna ɔbea no gyaw n’asuhina hɔ kɔɔ kurow no mu kɔka kyerɛɛ nnipa no sɛ: 29 “Mommra mmɛhwɛ ɔbarima bi a waka nea mayɛ nyinaa akyerɛ me. Ɛnyɛ oyi ne Kristo+ no anaa?” 30 Wofii kurow no mu baa ne nkyɛn. 31 Saa bere no nyinaa na n’asuafo no gu no so sɛ: “Rabi,+ didi.” 32 Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mewɔ aduan bi di a munnim.” 33 Enti asuafo no bisabisaa wɔn ho sɛ: “Obi abrɛ no biribi adi anaa?” 34 Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “M’aduan+ ne sɛ mɛyɛ nea ɔsomaa me no apɛde+ na mawie n’adwuma.+ 35 Ɛyɛ a monka sɛ aka asram anan ansa na otwabere no adu? Hwɛ! Mise mo sɛ: Momma mo ani so nhwɛ mfuw no sɛ ahoa sɛ wotwa.+ Seesei 36 nea otwa no regye akatua na ɔreboaboa aba ano ama daa nkwa+ sɛnea ɛbɛyɛ a nea ogu+ ne nea otwa ani begye.+ 37 Eyi ma asɛm no yɛ nokware sɛ, obiako yɛ ogufo na ɔfoforo nso yɛ otwafo. 38 Mesomaa mo sɛ munkotwa nea monyɛɛ ho adwuma. Ebinom ayɛ adwuma,+ na mo na moanya wɔn adwuma no so mfaso.” 39 Afei Samariafo a wofi saa kurow no mu no pii gyee no dii+ esiane asɛm a ɔbea no ka de dii adanse yi nti: “Waka nea mayɛ nyinaa akyerɛ me.”+ 40 Enti bere a Samariafo no baa ne nkyɛn no, wofii ase srɛɛ no sɛ ɔntena wɔn nkyɛn; na ɔtenaa hɔ nnanu.+ 41 Bio nso afoforo pii gyee no dii esiane nea ɔkae no nti,+ 42 na wofii ase ka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Afei de, ɛnyɛ w’asɛm no nti na yegye di; na yɛn ankasa yɛate+ na yɛahu sɛ onipa yi ne wiase agyenkwa+ no ampa.” 43 Nnanu no akyi no, ofii hɔ kɔɔ Galilea.+ 44 Nanso Yesu ankasa dii adanse sɛ odiyifo nni nidi wɔ n’ankasa kurom.+ 45 Enti bere a oduu Galilea no, Galileafo no gyee no, efisɛ wɔkɔɔ afahyɛ no bi,+ na wohuu nneɛma a ɔyɛe wɔ afahyɛ no ase wɔ Yerusalem no nyinaa.+ 46 Enti ɔsan baa Kana+ a ɛwɔ Galilea, baabi a ɔdan nsu nsã no.+ Na ahenkwaa bi wɔ hɔ a ne ba yare wɔ Kapernaum.+ 47 Bere a ɔbarima no tee sɛ Yesu afi Yudea aba Galilea no, osiim kɔɔ ne nkyɛn na ofii ase srɛɛ no sɛ ɔmmɛsa ne ba no yare efisɛ na ɔreyɛ awu. 48 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Mo de, sɛ moanhu sɛnkyerɛnne+ ne anwonwade+ a, munnye nni da.” 49 Ahenkwaa no ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, bra ansa na me ba ketewa no awu.” 50 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Sim kɔ;+ wo ba no te ase.”+ Ɔbarima no gyee asɛm a Yesu kae no dii na osiim kɔe. 51 Na bere a ɔnam kwan so rekɔ no, ne nkoa behyiaa no ka kyerɛɛ no sɛ ne ba no te nkwa mu.+ 52 Enti obisaa wɔn dɔn a ne ho yɛɛ no den. Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nnɛra dɔn a ɛto so ason* na atiridii+ no gyaee.” 53 Ɛhɔ na papa no hui sɛ ɛyɛ dɔn+ no ara na Yesu kae sɛ: “Wo ba no te ase.” Na ɔne ne fiefo nyinaa gye dii.+ 54 Eyi nso ne sɛnkyerɛnne+ a ɛto so abien a Yesu yɛe bere a ofi Yudea baa Galilea no.
^ Bɛyɛ awia dɔnkoro.